Na iza na iza mahafantatra tsara Weather Adaona for P3D?
fanontaniana Na iza na iza mahafantatra tsara Weather Adaona for P3D?
2 taona 1 volana lasa izay #17 by andhar
Na iza na iza hahafantatra izay tsara Weather Adaona for Prepar3D ??
2 taona 3 herinandro lasa izay #82 by Gh0stRider203
P3D aho, fa ny rafitra no toa tsy tia azy .....
Ny zavatra iray tena no efa nahita soa, ary mendrika ny hanaovana-jato, dia REX.
Raha Tsy mbola nampiasa azy io, efa nandre zavatra tsara momba ny FSRealWX. (Ary izany maimaim-poana, izay mazava ho azy ve aho kokoa)
Samy dia P3D mifanaraka
Manantena aho fa izany dia manampy!
1 taona 10 volana lasa izay #509 by flightas1
FSrealWX miasa tsara.